अचम्म ! फेसबुकको एउटै एकाउन्ट दुईवटा पासवर्डले खुल्छ, नपत्याए चेक गर्नुहोस् – Todays Nepal
कुनै पनि फेसबुक प्रयोगकर्तालाई आफ्नो एउटै फेसबुक एकाउन्ट दुई वटा पासवर्ड प्रयोग गरेर खुल्ने रहस्य थाहा नहुन सक्छ । तर, फेसबुकको एउटै एकाउण्ट दुई वटा पासवर्डले खुल्ने गरेको रहस्य पत्ता लागेको छ ।
कुनै पनि फेसबुक प्रयोगकर्तालाका लागि उसको पासवर्ड निकै नै महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । पासवर्डमा अलिकति पनि तलमाथि भयो भने पनि उसको एकाउण्ड खुल्दैन यो तथ्य सबैलाई थाहा छ । तर, फेसबुकमा भने दुई वटा पासवर्डबाट पनि खुल्छ पत्याउनुहुन्न भने यसरी प्रयोग गर्नसक्नुहुन्छ ।
तपाईले आफ्नो वास्तविक पासवर्ड राखेर फेसबुक लगइन गर्दै आउनुभएको छ । अब तपाइको वास्तविक पासवर्डको पछाडि सिंगल अंक थपेर लगइन गर्नुहोस् त त्यो पनि तपाइकै एकाउण्ट खुल्छ । तपाइको वास्तविक पासवर्ड र अंक थपेपछिको पासवर्ड नितान्त फरक हो । यदी तपाइले पासवर्डको पछाडि दोहोरो अंक राख्नु भयो भने खुल्दैन ।
पासवर्डको पछाडि सिंगल अंक थप्दा पनि फेसबुक खुल्ने कारण के हो ? फेसबुकसँग सिंगल अंकबीचको तादम्यता के छ ? सायद फेसबुकको सफ्टवेयर निर्माणकर्तालाई पनि थाहा नहुन सक्छ । अथवा उनीहरुले आफ्नो केही विशेष प्रयोजनका लागि पनि यस्तो राखेको हुनसक्छ । यो सर्वमान्य नियम हुँदो हो त, सामाजिक सञ्जालहरु ट्वीटर, जीमेल, युट्यूवमा, इन्टाग्राम लगायतका एकाउण्ट पनि यसरी नै खुल्नुपर्ने हो । तर, फेसबुक बाहेक अरु कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल खुल्दैनन् ।
यसरी फेसबुकमा मात्र दोहोरो पासवर्ड लाग्ने भएका कारण फेसबुकको गोप्यतामा निकै नै कमजोर रहेको अनुमान भने सहजै लगाउन सकिन्छ । यसले फेसबुक ह्याकरहरुका लागि पनि झन सहज बनाएको हुनसक्छ । विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएको फेसबुकमा पत्ता लागेको यो तथ्यलाई फेसबुकको कमजोरीपनका रुपमा समेत लिन सकिन्छ ।
तपाईहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ ! काठमाडाैंका करोडपतिहरू लास बोकेका कफिनमाथि सुत्ने गर्छन ।